​विद्युत लोडसेडिङले भैरहवाका उद्योग संकटमा पर्दै, उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म कटौंती
लुम्बिनी । रूपन्देहीका उद्योग विद्युतभारका कारण सङ्कटमा परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमित रुपमा वितरण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रका उद्योग संकटमा परेका हुन् । लामो समयसम्म कच्चा पदार्थ र इन्धनको..
​भारतीय ६ सय उद्योगीेले नेपालमा ८० अर्ब लगानी गर्ने, ६५ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं । मुलुकमा ऊर्जाको चरम सङ्कट बढेको बेला छिमेकी भारतका १९ उद्योगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र रू ४५ अर्ब ८० करोड ३० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने भएका छन् । भारतका ६..
१० हजारको ल्याप्चे लगाँउदै, आठ लाखसम्म उठाउँदै
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरे पनि म्यानपावरले रू १० हजार लिएको कागजमा कामदारलाई सहिछाप गराउँदै भारी मात्रामा रकम असुल्दै आएको खुलेको छ । यसअघि ठगी..
​नेपालमा चीनको ९३० उद्योगले साढे २५ अर्ब लगानीकौ स्वीकृति, ४५ हजारलाई रोजगारी दिने
भीष्मराज ओझा काठमाडौ । मुलुकमा पर्याप्त विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला छिमेकी मुलुक चीनका मात्र ९३० उद्योगले २५ अर्ब ४८ करोड ८० लाख भन्दा बढी लगानी गर्न स्वीकृति..
एप्पल साइडर शनिबारदेखि पोखरामा विक्री, ग्राहकलाई नयाँ स्वाद, मूल्य एक सय
पोखरा । गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादन सोमर्सबी एप्पल साइडर शनिबार पोखरामा सार्वजनिक गरिएको छ। होटल वाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनिका अधिकारीसहित बिक्रेता, सरोकारवाला र पत्रकारले संयुक्त रुपमा सोमर्सबी सार्वजनिक गरे । यसअघि..
​चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल २५ करोडमा बन्ने, सरकारले ७ करोड दिने
चितवन । सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुने भएको छ । उद्योग सङ्घ चितवनको अगुवाइमा भरतपुरको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परिसरमा प्रदर्शनी स्थलको निर्माण हुने..
बजेटबाट कुन बस्तु तथा सेवामा कति बढ्यो मुल्य
बढ्यो बियर एक लिटरमा ८ रुपैयाँ महँगो भएको छ, बियरमा यसअघि अन्तस्शुल्क ९८ रुपैयाँ रहेकोमा अब १०६ पुगेको छ । सुर्ती तथा चुरोटमा १३ प्रतिशतसम्म अन्तस्शुल्क बढाइएको छ । मदिरामा न्यूनतम १० र..
​नेपाल–चीनबीच लगानी, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड
काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच लगानी, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइएको छ । चीनको कम्युनिकेसन अफ इन्डस्ट्री एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अफ गान्सु प्रान्तका उप–निर्देशक झांग फुकुइको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएका १३..
​हिमालय एयरलाइन्सको सेल्स अफिस गैहृीधारामा
काठमाडौँ । नेपाल–चीनको सँयुक्तलगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्स्ले आज गैहृीधारामा आफ्नो सेल्स अफिस खोलेको छ। आज एक कार्यक्रमकाबीच भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठले कम्पनीकै कमर्सीयल तर्फका जेनरल म्यानेजरलाई पहिलो टिकट हस्तान्तरण गर्दै सेल्स..
संस्थानको नाफा ३४ अर्ब, सरकारी ३७ संस्थानमध्ये २० नाफामा
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा ३७ सार्वजनिक संस्थानबाट रु ३३ अर्ब ९२ करोड २७ लाख खुद नाफा भई संस्थानको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति..
स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रबर्धनका लागि ‘खाद्य मेला’
काठमाडौं । असल खानपानका लागि खानेबानिमा परिवर्तन, पोषिलो स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रबर्धन, परम्परागत’ भन्ने नाराका साथ यहि जेठ २१ र २२ गते ओखलढुंगामा ‘खाद्य मेला’ आयोजना हुने भएको छ। क्षेत्रीय खाद्य..
​चीनबाट काठमाडौंका लागि रेल छुटेपछि उत्साह, समान ल्याउन ५०० कन्टेनर तयार
धुन्चे । नेपाल र चीनबीच व्यापार–व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न रेलमार्गबाट सामान आएको खबरले यहाँका व्यवसायीमा उत्साह बढेको छ। चिनियाँ भूभागको लामो दूरीबाट रेलद्वारा सामान आउँदा आदेश गरिएबमोजिम सिगात्सेसम्म यथेष्ट सामग्री आउने र..
नयाँ बसपार्कमा अत्याधुनिक सपिंग कम्प्लेक्स बिजि मल सञ्चालन
काठमाडौं । राजधानीको ब्यापारिक केन्द्र नयाँ बसपार्कमा अत्याधुनिक सपिग कम्प्लेक्स बिजि मल सञ्चालनमा आएको छ । बुधबार एक समारोहका बीच पुर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका..
​दरवारमार्गमा खुल्यो जापानीज फ्राइड चिकेनको नयाँ आउटलेट
काठमाडौं । जापानको प्रतिष्ठित र लोकप्रिय तोयोकाराग्गे ९जापानीज फ्राइड चिकेन०को चौथो आउटलेट बुधबारबाट दरबारमार्गस्थित शेर्पा मल परिसरमा संचालनमा आएको छ । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले शाखाको उदघाटन गरे ।..
​चीनबाट इन्धन आयात गर्न अर्को समिति
काठमाडौं । सरकारले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न फेरि नयाँ समिति गठन गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख आनन्दराम रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति..
कर तिर्दैनन् ठूला व्यवसायिक भवन र मलहरुले
काठमाडौँ । पछिल्लो समय होटल करको दायरामा आए पनि सार्वजनिक संस्थान र ठूला व्यापारिक भवनले महानगरपालिकालाई कर तिर्न अझै आलटाल गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार कर नतिरेको भन्दै कानुनी..
​एकै गाउँमा दैनिक १७ सय किलो खुवा उत्पादन
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको च्याम्रेङबेसी गाविसमा खुवा उद्योग फस्टाउँदै गएको छ। स्थानीय किसानका लागि आयआर्जनको स्रोत बनेपछि खुवा उद्योग फस्टाउन लागेको हो । म्रेङबेसी गाविसमा कूल १७ वटा खुवा उद्योग सञ्चालनमा रहेका..
​औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नपर्ने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले हाल सञ्चालित आद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उद्योगलाई अझ..
डिस होमको नयाँ योजना ‘बजाइराखौं ताली, तीन हजार छुट फेरि यसपाली’
काठमाडौं । डिसहोमले नयाँ ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर तीन हजार रुपैयाँ छुटसहित खरिद योजना ल्याएको छ । डिस होमले ‘बजाइराखौं ताली, तीन हजार छुट फेरि यसपाली’ नामक नयाँ ग्राहक योजना ल्याएको हो..
चप्पल उद्योग सङ्कटमा, करीब १ हजार मजदुरको रोजगारी गुम्ने खतरा
वीरगन्ज । भारतीय चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यहाँका आधा दर्जन चप्पल उद्योग सङ्कटमा परेका छन् । सस्तो मूल्य र गुणस्तरहीन भारतीय चप्पल अवैधरूपमा भित्रिने क्रम वृद्धि भएपछि नेपाली चप्पल उद्योगले प्रतिस्पर्धा..
​जावलाखेलमा खुल्यो सोनीको नयाँ सोरुम
काठमाडौं । ललितुरको जावलाखेलमा सोनी सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । ग्राहकहरुलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बिहीबारदेखि सोनी ब्राण्डको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपा हिमा ट्रेड लिङ्कले उक्त सेन्टर..
आयल निगमको एक वर्षमा २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको तेल गायब
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा खरिद गरेभन्दा करिब तीन करोड लिटर तेल कम बिक्री गरेको छ। तापक्रम र प्रशासनिक चुहावटका कारण इन्धन नोक्सानी भएकाले कम..
​रत्नपार्कमा कि गए ? एकै दिनमा एक लाख तिरेर सर्वसाधारणहरु
काठमाडौँ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार रत्नपार्कको आम्दानी एक लाख तीन हजार भएको छ। यो अहिलेसम्मकै धेरै हो । रत्नपार्क तथा रानीपोखरी एकाइका प्रमुख हरिशरण केसीका अनुसार तीन हजार ६०२..
​एकै दिन ७ सय रुपैयाँले घट्यो सुन
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा कारोबार भएको पहिलो दिन सुनको भाउ प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो कारोबारमा प्रतितोला ५५ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको सुन आज घटेर ५४ हजार ५..
​एलजीका नयाँ सोरुम गोंगबु र भक्तपुरमा, खरिदमा विशेष छुट
काठमाडौं । सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले एलजीको नयाँ सोरुम खोलेको छ। कम्पनीले गोंगबु र भक्तपुर ठिमीमा क्रमशः गोंगबु एलजी हाउस र टिभी प्वाइन्ट नामबाट आफ्नो सोरुम खोलेको हो। ग्राहकलाई एलजीका सामग्री तथा उत्पादनहरु खरिदमाह..
प्रभु मनिबाट रेमिटेन्स लिनेलाई एनटिसीको ३जी सीम, ३ लाख जनालाई निशुल्क दिने
काठमाडौं । प्रभु मनि ट्रान्स्फरले नेपाल टेलिकमसँग मिलेर विदेशवाट नेपाल पठाएको पैसा भुक्तानी लिँदा पैसा लिने आफन्तलाई ५० रुपैयाँ टक टाईम भएको ३जी सिम वा रिम कार्ड निशुल्क दिने भएको..
​नयाँ वर्षको अवसरमा ललितपुर मलमा ४० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । ललितपुरको लगनखेलस्थित ललितपुर मलले नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा वैशाख १ गतेदेखि १० गतेसम्म मेला आयोजना गर्ने भएको छ। १० दिनसम्म चल्ने उक्त मेलामा हरेक प्रकारका सामग्रीको खरिदमा ४०..
उद्योग व्यवसायका लागि २०७२ साल कालो वर्ष, भुकम्पभन्दा नाकाबन्दी चर्को पर्यो व्यवासायीलाई
नारायण अधिकारी चितवन । विसं २०७२ लाई यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले कालो वर्षका रुपमा लिएका छन्। नयाँ वर्षको शुभारम्भमै गएको भूकम्प र त्यसपछिको तराई बन्दसँगै भएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण पूरै वर्ष उद्योगी–व्यवसायीका लागि निराशाजनक..
व्यवसायीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन एकसय अर्बको पुनरोद्धार कोष स्थापना हुने
चितवन । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले एक सय अर्ब रुपैयाँको पुनरोद्धार कोष ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्। चितवनको रत्ननगरमा बिहीबार भएको केरा किसानको वार्षिक साधारणसभामा उनले भूकम्पलगायतका..
गोदरेजका सामान खरिदमा ‘क्यास ब्याक’ अफर
काठमाडौँ । गोदरेज कम्पनीले नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकहरुका लागि गोदरेजका उत्पादनको खरिदमा ‘क्यास ब्याक’ अफर ल्याएको छ। अफर अन्तर्गत ग्राहकले गोदरेजका उत्पादनको खरिदमा तुरुन्त १० हजार रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक पाउन सक्ने..
Results 889: You are at page 14 of 30